Umlilo Wamahhala we-PC - Landa iWindows 10 ne-Mac - Ukudlala
Ngabe ufuna ukufaka i-Free Fire ku-PC yakho?Kulungile. Ngemuva kwalokho namhlanje uze endaweni efanele. Sikwenzele okuthunyelwe okuphelele ku-Free Fire okuzofaka umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo ukufaka iFree Fire. Ngakho-ke, ngasekupheleni kokuthunyelwe, uzoba nomqondo ophelele weGarena Free Fire.
Ungayisebenzisa i-Free Fire ku-PC?
Umlilo Wamahhala ungomunye umdlalo osuselwa kumqondo weBat Royale. Lo mdlalo wenziwa yinkampani iGarena futhi uyatholakala ku-android / iOS / PC. Izenzo ezisezingeni eliphakeme ze-octane nemidwebo ejabulisayo zenza lo mdlalo ube ngowokuqala emakethe.IFire Fire bekungumdlalo wokuqala ukwethulwa ku-Google Play Isitolo ukunika amandla abadlali beselula ukuthi badlale i-battle royale. Akuvamile, futhi ungangena futhi udlale noma kunini lapho ufuna khona.
Ungawuthola Kanjani Umlilo Wamahhala ku-PC yakho?
Njengoba iFree Fire ingenayo i-emulator esemthethweni, kuzofanele sisebenzise iBlueStacks ukulanda umdlalo. Ngakho-ke inqubo yokulanda iyefana kuwo womabili amaWindows kanye neMAC. IBlueStacks iyi- Isipele se-Android lokho kuzolingisa idivayisi ye-Android kwi-PC yakho futhi kukunike amandla ukusebenzisa zonke izinhlelo zokusebenza ze-Android ngaphandle kwemingcele.
Isinyathelo ngesinyathelo Umhlahlandlela Wokuthola Umlilo Wamahhala Ku-PC:
Chofoza lapha ukulanda inguqulo esemthethweni ye-BlueStacks.
Qalisa i-BlueStacks bese uqedela inqubo yokubhalisa, efana kakhulu nokusebenza kwedivayisi ye-android.
Iya ku-Google Play Isitolo bese useshe iGarena Free Fire bese ufaka umdlalo, kuzothatha isikhathi esithile njengoba amafayela womdlalo cishe eyi-2.3 GB.
Lapho ukufakwa sekuqediwe, vula umdlalo futhi wenze ngezifiso okokubopha okhiye njengokuthanda kwakho, futhi ulungise ihluzo ukuze ivumelane nokukhetha kwakho.
Izici Eziyinhloko Zomlilo Wamahhala:
Ngakho-ke, ungahle ucabange, iyini impi Royale? Yebo, ukunqoba lo mdlalo, kufanele ube phambili futhi ushaye wonke omunye umdlali ukubanga isikhundla se- # 1. Kuzoba nabanye abadlali abangama-50 abazoncintisana nawe ukubanga isihloko se- # 1, kepha kudingeka uqaphele futhi uhlele uhlelo lwakho lomdlalo. Ukwenza izinto zithakazelise, uMlilo wamahhala unezinkathi ezihlala cishe inyanga eyodwa. Ngakho-ke, ungahle ube nokujula okuthile mayelana nomdlalo.
Kunamamephu amathathu amakhulu ongakhetha kuwo iBermuda, iPurgatory, neKalahari. IBermuda ithathwa njengehamba phambili phakathi kwamamephu atholakalayo njengoba amanye amabili emasha, futhi isasalele emuva kumiklamo. IBermuda inezithombe ezinhle kakhulu ezitholakalayo ngakho-ke inabadlali abaningi abathanda iBermuda njengebalazwe labo eliyinhloko. Futhi, iBermuda inamachibi atholakalayo atholakalayo kulo mdlalo, kubukeka kuhlakaniphile kususelwa ezifundeni ezishisayo. Ngisho nesihlanzo sinomklamo ofanayo, kepha iKalahari isuselwa kakhulu ezifundeni zasogwadule.
Ungahlala nawe nabangane bakho bese kukuwe ukuthi ukhethe isu elihle kakhulu lomdlalo, ungalinda futhi uphange kuze kufike izitha kuwe, noma ungazibulala lezo zitha ngempango eyinhloko futhi ube nempango yazo esikhundleni salokho. Lelisu lingaziwa njengokujaha, kanti isu langaphambilini laziwa ngokuthi yikhempu; lawa ngamasu amabili kuphela abantu abavame ukuwasebenzisa, babulale isitha, noma babe yizisulu zabo.
Enye yezinzuzo ezibaluleke kakhulu zomdlalo ukuthi inabadlali abangama-50 kuphela endaweni yokwamukela izivakashi kunokuba ibe yi-100 yendabuko, ngakho-ke kuthatha isikhathi esincane ukuqedela umdlalo, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngokuthi umdlalo uzothatha isikhathi. Uzothola nezimoto ezisheshayo ezizungeza zisuka kwenye indawo ziye kwenye lapho isitha sikudubula ngokukhululekile. Enye yezinzuzo ezibaluleke kakhulu zomdlalo ukwenziwa ngokwezifiso, njengoba udlala ngokubuka komuntu wesithathu uzokwazi ukubona izikhumba abazobe bezigqokile, okubaluleke kakhulu kweminye imidlalo, ungabona kuphela ingxenye engenhla uhlamvu, kepha kulo mdlalo. Futhi, ukunakwa kwemininingwane kakhulu.
Amamodi wegeyimu adumile On Fire Free:
Imodi yakudala:Lesi yisidlali esidala uma kuqhathaniswa nemodi yesidlali. Bazoba ngama-50 sebebonke, nabanye abadlali bazobe bencintisana ngesikhundla esiphambili, kuzodingeka nokuthi ulwe nokubanga isihlalo sobukhosi, ngakho-ke qaphela. Ungakhetha imephu oyifunayo kusuka ePurgatory, eBermuda, noma eKalahari.
Umdlalo obekwe ohlwini:Lokhu akuhlukile kakhulu kunomdlalo wakudala, kepha kunokuphambuka okuzokwahlulelwa kumdlalo wakho wegeyimu bese unikezwa imigqa efana nethusi, isiliva, negolide lapho ukhuphuka kakhulu esikhundleni ozobhekana naso esimangele futhi esinzima abadlali. Lokhu kwaziwa njengokumaketha okwenziwa ngamakhono. Uzokwenzelwa ukulwa nabadlali abanomqondo ofanayo womdlalo njengawe, ngakho-ke izinto sezizokuba zimbi. Ngeke futhi uthole ithuba lokukhetha imephu ngokwesifiso sakho ngenkathi udlala kule modi.
Ihora eli jahekile:Le modi inguqulo encane yemodi yakudala. Kule modi, imephu izoncipha kakhulu, futhi abadlali bazokhawulelwa kwabangama-20 kunabangu-50, okuwukuphela kwenjabulo yalokhu ukuthi kuzothatha uhhafu wesikhathi ukuqedela umdlalo.
I-Duos:Ngabe ufuna ukudlala nomngani oyedwa nje? Yebo, le yimodi yakho, wena nomngani wakho nizolwa nabanye abadlali ukunqoba lo mdlalo, imithetho izofana ncamashi naleyo yakudala kepha bonke abanye abadlali nabo bazoba ngababili.
Amaqembu:Ungahle uhlanganyele nabangane bakho abathathu ukwakha iqembu labane, futhi uzolwisana nabanye, njengama-duos kepha manje abanye bazobe sebeseqenjini labane ngakho-ke kufanele uxhumane nabangane bakho futhi uqiniseke ukuthi okuyiwona kuphela iqembu elisindayo.
Ezinye izindlela:Ama-Deathmatches, i-Cold steel, i-Bighead, i-Clash squads, i-Rampage, ekhokhiswe ngokugcwele, i-Spray futhi uthandaze, Rush king. Zonke lezi zindlela zitholakalela isikhathi esinqunyelwe ngaphandle kwe-deathmatch yeqembu. Kumdlalo wokubulala weqembu, ungahle ungakhathazeki ngempilo yakho njengoba uzovuselelwa njalo lapho ubulawa, le ngenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuzijwayeza ukuphatha izibhamu nokuzivikela kwabanye abadlali.
Izikhali Ezidume Kakhulu Emlilweni Wamahhala:
Lolu hlu luzoqukatha kuphela izikhali ezilusizo kuwe njengokuqala; uzokwazi ukusebenzisa lezi zikhali ngokudlala umentshisi owodwa kuya kwemibili kahle. Uma usuvele udlale enye impi yempi, ungakhathazeki nakancane ungaziphanga lezi zibhamu ngenkathi udlala lo mdlalo.
Isibhamu esaziwa kakhulu sanoma yimuphi umdlalo, zicabange unenhlanhla uma ungasithola ezandleni zakho. Ngalesi sibhamu, uma ungathola i-headshot, khona-ke isitha sizofa ngokushesha. Okuwukuphela kwesikhwama salesi sibhamu ukuphatha njengoba i-AK inokubuyiswa okusindayo kuba nzima ukuthola isandla kwiphethini yesifutho okufanele uziqeqeshe kuyo i-deathmatch yethimba bese usebenzisa lesi sibhamu kuyimodi yakudala noma esezingeni.
Izinamathiseli:i-silencer, isifonyo, i-foregrip, umagazini, ububanzi.
Lokhu futhi kungaba inketho yakho njengoba isibhamu somzimba sithanda kakhulu ngenkathi usebenzisa i-SCAR, njengoba i-SCAR ingenayo iphethini yesifutho ngaleyo ndlela ungakhomba futhi udubule isitha ngaphandle kokukhathazeka ngephethini yesifutho.
Nakulesi sibhamu, awudingi ukukhathazeka ngephethini yesifutho ngoba kuncane ukubuyela emuva uma kuqhathaniswa nezinye izibhamu. Kodwa-ke, uhla lwesibhamu luhloniphekile, ngakho-ke qiniseka ukuthi usondela eduze kwesitha ngenkathi udubula ukuze uzuze ukubulala. Lapho uqala umdlalo kulapho usaqala nje, kufanele ukhethe ukusebenzisa lesi sibhamu ngoba lokhu kuzokunikeza umbono omubi ngomdlalo ngaphandle kokuthi ubulawe kaningi.
4. Isibhamu esishisayo
Lokhu akuvamile; ungahle ungasithathi njengesibhamu sokuhlasela, kepha sisebenza njengesinye.
Uma sisetshenziswe ngokufanele lesi sibhamu kungaba umshini wokubulala; uma ufuna ukucupha-ke lesi yisibhamu sakho, sihambisana nesikhala esingu-8X ukuze ukwazi ukudubula izinhlamvu kude. Isikhali sizosheshe sibulale noma isiphi isitha uma ungakwazi ukukhipha i-headshot, kepha qiniseka ukuthi uyakwazi ukushutha. Okunamathiselwe: i-silencer, isifonyo, ubukhulu.
Lesi sibhamu sifana ncamashi neKar98k kodwa sinejubane lokulayisha kabusha okusheshayo; futhi, inika amandla abadlali ukwengeza umagazini owengeziwe.
Izinamathiseli:silencer, isifonyo, ubukhulu, umagazini.
Ukuthola impilo:AmaMedkits, Amakhowe, izibhamu zokwelapha konke kungasetshenziswa ukukhulisa amaphuzu akho ezempilo.
Lezi yizigaba ezihamba phambili zezikhali ongazisebenzisa manje kukuwe ukuthi usebenzise ama-SMG, amavolovolo, noma ezinye izikhali ze-melee. Kodwa-ke, sincoma kakhulu ukuthi usebenzise izibhamu ezinikezwe kuhlu lwethu.
I-Elite Pass Yomlilo Wamahhala:
Ukushintshanisa imali engaphakathi kwegeyimu, ungathenga noma yikuphi kokudlula okubili, inqwaba yabafundi abaphezulu nabakhulu; lena ukuphela kwendlela yokuthi uvule izikhumba futhi ujabulele umdlalo ngokuthembeka. Ngokufinyelela kwe-Elite uzothola amadayimane ayizinkulungwane eziyishumi, uzokwazi ukuvula izinselelo zokukhetha bese uhola amabheji amaningi, umkhawulo wegolide wansuku zonke uzokhushulwa nge-100, igama lakho lesidlaliso lizokhonjiswa ngokubomvu okuchumile lapho ushaya ukubulala. Ngenqwaba ye-elite, uzothola izinzuzo ezifanayo nokuphasa okukhethiwe.
Noma kunjalo, ngaphezu kwalokho, uzovula i-avatar ekhethekile, uvule amabheji wesizini ngokungafi futhi uvule amathani wemiklomelo ekhethekile kunqwaba kuphela. Iphasi elite lizobiza amadayimane angama-499, kuthi imali ye-elite fortune ibize amadayimane angama-999.
Buhle Bomlilo Wamahhala:
Ukwenza ngokwezifiso umlingisi kuhamba phambili kulo mdlalo; uzokwazi ukubona wonke umqulu njengoba unakekela imininingwane kahle.
Izindlela nezinkathi zonyaka zenza umdlalo ujabulise impela ngoba Umlilo Wamahhala uhlose ukuletha izinkathi, ukuhambela nezikhumba ezithokozisayo ezingaphezulu kokunye.
Umlilo Wamahhala unesisekelo esikhulu sabalandeli esinokulandwa okungafika ku-500 + Million okwenza umdlalo ufune futhi ube nokuncintisana.
Umlilo Wamahhala usebenzisa isikhathi esincane ngokuqhathaniswa kunenye iBattle Royale futhi ikunikeza okuningi kokuncane.
Nebubi Free Fire:
Ihluzo zomdlalo azizinhle kangako uma ziqhathaniswa nezinye izimbangi.
Uhlobo lwe-battle royale luqhakaze eminyakeni emibili edlule, futhi kufanele uzame lena njengoba ingesinye sezizukulwane ezinhle kunazo zonke. Amazwe amaningi avinjelwe I-PUBG mobile, ngakho-ke lokhu kungaba enye indlela enhle kakhulu kulokho. Ngiyethemba uthole ukuqonda okucacile kweFree Fire futhi uyazi ngazo zonke izici zeFree Fire.
Uma unanoma yimiphi imibuzo noma imibono mayelana noMlilo Wamahhala usazise ebhokisini lengxoxo elingezansi.
amawebhusayithi wamahhala wamahhala wamahhala ngaphandle kokubhalisela
uhlelo lwe-id phansi ye-roblox
kungani i-netflix iphumelele
ukuba futhi ube nokubuka online
amawebhusayithi we-tv wamahhala online
uhlu lwamahhala lwamakhodi we-psn 2016